Iyo yakanakisa chess mitambo yePC | Gadget nhau
Paco L Gutierrez | 09/04/2021 18:22 | Yakagadziridzwa ku 09/04/2021 18:39 | General, videogames
Kana paine mutambo wekare uye unonakidza webhodhi, umo kukosheswa kwedu kwakakosha kuti tikunde, iri chokwadi Chess, mutambo webhodhi uko kuronga uye kufunga nezvesarudzo imwe neimwe zvine hungwaru ichave ndiyo kiyi yekuguma mukukunda. Mutambo uyu wakaona mavambo awo kumashure mukati memakore mazana matanhatu / mazana masere mushure maKristu uye haina kusvika muzana ramakore rechi600 apo yakapinda muSpain kuburikidza nemaArabu. Pasina kupokana, mutambo wenhoroondo unoramba uri mudiki kunyangwe warasikirwa nemhepo yakawanda muzera redhijitari.
Parizvino zvakajairika kwatiri kuti tiwane pasina anotamba mutambo weChess. Munguva yenguva mbozhanhare nemitambo yemavhidhiyo, zvinoita sekunge zvakaoma kuona mukomana wepakati nepakati kana murume achitamba mutambo pane yakasarudzika bhodhi, saka sarudzo yakanakisa kana tichida kutamba chess kuzviita muchimiro chevhidhiyo mutambo. Asi Hausi mutambo chete, chess inoonekwa semutambo wehungwaru uye makwikwi makuru anotambwa pasirese nemitambo inogona kugara maawa matanhatu. Muchikamu chino tichaenda kuona yakanakisa yemahara chess mitambo yePc yakafumurwa.
1 Chess mitambo yePC
1.4 Zen Chess: Mate mune Imwe
1.7 Tafura yetafura Simulator
2 Mawebhusaiti ekutamba chess
Chess mitambo yePC
Tiri kuenda kune zvakadzama mune diki runyorwa iyo inokwezva chess mitambo yatinogona kuwana pane PC chikuva, ese iwo ane akabhadhara kana emahara kunyorera kwesarudzo yemutambi. Tinogona kuwana kubva kune yakasarudzika mutambo mune maviri madhivhuru kana mimwe mitambo yakajeka mumatatu matatu ine chaiyo mifananidzo.
Isu tinotanga neimwe yemitambo yechess ine akanakisa magiraidhi, mutambo unonyanya kutarisa kune avo vasina ruzivo vatambi vanoda kunakidzwa neruzivo rwunogutsa sekufadza kwazvinoita. Musoro zvakanyanya inokurudzirwa nemakuru emutambo uyu ine makomendi uye hombe dhatabhesi yeimwe yacho, kufanana mukuru Kasparov. Uyu mutambo unoongororawo nzira yedu yekutamba kuti tizvimise isu pachinzvimbo uye toenzanirana nevanopikisana nezinga redu rakaenzana.
Tine foramu yemukati matinogona kubvisa kusahadzika nevamwe vatambi kana kutaura pamusoro pemitambo yavo inoonekwa mune mimwe mitambo. Iyo asi yemutambo mukuru uyu mutengo wayo uye ndewokuti inodhura € 50 saka kunyangwe uri mutambo unonakidza mutengo wawo unorambidza kana isu tichingoda kutamba mutambo mumwe chete.
Isu takaratidza chikamu chakajeka chemutambo wapfuura uye iyi Chess Ultra haina kuseri kumashure mune izvi, nekuti ndeimwe yemitambo yechess ine yakanakisa technical chikamu pane irondedzero. Mutambo unokwanisa kutiratidza mifananidzo kusvika ku4K resolution yemuno. Iyo ine imwechete mutambi modhi uye yakakura yakawanda yevatambi modhi umo matinogona kuwana anokwikwidza anenge ipapo ipapo.
Kana izvo zvatiri kutsvaga ndezvekutamba tiri toga, isu tine akati wandei ma modhi emitambo uye nehungwaru hwakashanda hwekunyepedzera, hunotipa mitambo yakasimba uye inogara kwenguva refu sekunge mutambo chaiwo. Mutambo wakakurudzirwa zvikuru kune chero fan chess. Kusiyana neiyo yapfuura, iyi ine mutengo unokwezva kwazvo we € 5,19 iripano Steam.
Isu tave kuenda neyekutanga yemahara mutambo pane iyo runyorwa uye inogona kuve iri yeakanakisa sezvo ichifarira zvese zviri zviviri yakanaka technical chikamu uye yakawanda yakanaka ruzivo. Iyo inopa yakakura chikamu chedudziro pane ese ari maviri bhodhi uye zvidimbu. Mutambo unozivikanwa kwazvo pakati pevateveri ve chess nekuti ndewemahara uye nekuda kwenharaunda hombe inoiperekedza.
Tine nhanho dzakasiyana dzekunetseka kugona kunakidzwa nemutambo zvisinei nekugona kwedu. Zvinokurudzirwa kutanga pane zvakaderera kana isu tine ngura. Sezvatakambotaura pakutanga, mutambo uyu wakasununguka zvachose uye tinogona kuutora kubva kwako Peji yewebhu.
Zen Chess: Mate mune Imwe
Takasvika pane mumwe wemitambo yakapusa uye yakapfupisa pane irondedzero, ine dhizaini yakanyanya inotiyeuchidza zvakawanda zvemutambo wefoni kupfuura mutambo wecomputer, ine chikamu chakareruka chakajeka. Iyi Zen Chess yakanangidzirwa kune vateereri vasina hanya vanotsvaga kutamba mitambo yakasununguka uye inokurumidza pasina fan fan.
Vanos isu tinowana akawanda matambudziko ekukunda akagadzirwa neakanakisa masters munyika ye chessSezvatiri kufambira mberi, zvinonetsa zvinowedzera kuomarara, kunyange hazvo chinangwa chedu chichigara chakangofanana, kuti titarise nekukurumidza sezvinobvira kupedzisa kuhwina mutambo. Mutengo wayo zvakare wakapusa uye tinogona kuuwana mukati chiutsi ye € 0,99, yakakurudzirwa zvikuru kana izvo zvatiri kutsvaga zviri kungonakidzwa.
Lucas Chess mutambo unoratidzika kuve wakasununguka sosi, saka tinogona kuutora mahara kubva pawebhusaiti. Tine kusvika makumi mana emitambo modes umo matinogona kutanga pazasi kuti tiite zvirinani kusvikira tazotamba mitambo senge tenzi wechokwadi. Hunyanzvi hwekugadzira hunochinjika zvakakwana padanho rega rega rekutambudzika iro Panguva yayo yepamusoro, inotipa epic mitambo yemhando yepamusoro.
Tine Multiplayer muoti kutarisana vatambi kubva pasi rose yokuisvonaka. Mutambo unoonekwa kuwanda kwezvirongwa uye kumisikidzwa saka tinogona kushandura mitambo chero nguva uye nekudaro tisingavhiringidze mutambo kana chimwe chinhu chisiri sezvatinoda.
Unonakidza mutambo wekutanga munyika yechess, nekuti iri chirongwa chakagadzirwa uye uye chekudzidza. Iyo ine akawanda akasarudzika mibairo muchikamu nekuda kweiri nyore uye yayo nhamba yakawanda yematanho ekuoma, iyo inobvumidza kuchinjika kune chero mhando yemutambi. Chinhu chakanakisa nezvechirongwa ichi ndechekuti iri multiplatform uye tinogona kuiwana pane ese makomputa uye nhare, saka zvinokurudzirwa kwazvo.
Kukanganisa kwayo kukuru kuri mumutengo Uye hausi mutambo wakachipa, mutengo waro uri € 70 kunyangwe iine 30-zuva rekuyedza vhezheni yeMac kana Windows, nepo nharembozha ichidhura nezve € 10 uye ine yemahara vhezheni yakatemwa kubva kwatinogona kunakidzwa kana tiri vanhuwo zvavo. vatambi.
Tafura yetafura Simulator
Sekureva kwezita rayo, iri rakakura bhodhi mutambo simulator, yawana mukurumbira wakawanda mumakore achangopfuura nekuda kwemhando dzakasiyana dzemitambo, asi ichisimbisa mutambo wayo wechess zvairi inokurudzirwa mumaforamu mazhinji akatsaurirwa chess. Kusiyana nevamwe, mutambo uyu unotibvumira kuti tigadzire mutambo mukuda kwedu nemitemo yedu, tichiita kuti chess irege kuva chess.
Zvakare, sezvatataura, tinogona kutamba mimwe mitambo yemakadhi yemhando yepamusoro, senge macheki, makadhi, madomino kana kunyange Warhammer. Isu tine online mode yekutamba ichipesana nevatambi vanobva pasirese pasirese kuburikidza neSteam maseva. Kudyidzana kwemutambo uyu kwakadai kuti kana mutambo usiri kuenda sezvataitarisira, tinogona kuburitsa hasha dzedu dzese kumabhodhi emitambo topedzisa mutambo nenzira yakaoma, kunyange hazvo muvengi wedu anga asinganyanye. Mutambo unowanikwa mu chiutsi ye € 19,99 mune yayo yakajairwa vhezheni kana € 54,99 mune yayo 4-pack vhezheni iyo inosanganisira zvese zvaro zvekuwedzera zvemukati.
Mawebhusaiti ekutamba chess
Pano tiri kuzotsvaga mamwe mawebhusaiti uko kwatinogona kutamba chess online pasina chikonzero chekuisa application pakombuta yeduIsuwo hatina zvishoma zvinodiwa sezvo tichizotamba kuburikidza nekushambadzira kubva kune edu ewebhu webhu.
Yakakurumbira uye yakazara webhusaiti kwatinogona kuwana hwakawanda hweinjini dzemitambo uye renzvimbo bhodhi uko tinogona kuwana anopfuura mamirioni mashanu emitambo kubva kumativi ese epasi. Kana isu tichida kutamba pamhepo, zvinotifananidza nevakwikwidzi zvinoenderana nehunyanzvi hwedu hwehunyanzvi. Tine imwechete mutambi modhi umo tichafanirwa kusarudza kuoma.
Iyi webhu chirongwa ine akawanda marongero yemutambo, kunyangwe ichiratidzika kunge yakapusa asi ichinyatso shandwa uye chakanakira ndechekuti tinogona kuiwana kubva kune chero chikuva umo isu tine yakasanganiswa webhu bhurawuza.
Zvimwe Yakakurumbira webhusaiti pakati pe chess mafeni, pawebhusaiti ino tinogona kuyedza hunyanzvi hwedu nevamwe vatambi vepamhepo, pamwe nekutamba tichipesana nehungwaru hwekunyepedzera. Isu tinowanawo kuwanda kwemazano uye dzidziso kuti tivandudze hunyanzvi hwedu uye nekuwedzera nekukwikwidza.
Kana tikabvunza isu tinowana ese marudzi ese eruzivo uye zvinyorwa zvinopihwa neakanakisa chess masters, pamwe nebhodhi renhau kwatingawana ese nhau maererano nechess kana zviitiko zviri kuuya. Kunge webhusaiti yapfuura, izvi zvinogona kushandiswa kubva kune chero chishandiso chine yakasanganiswa webhu bhurawuza, saka tinogona kuinakidzwa kubva kune mbozhanhare yedu.
Kana chess ichikundikana uye isu tiri kutsvaga manzwiro akasimba, tinogona kutarisa kune imwe iyi vhidhiyo yemitambo runyorwa kwatinowana akanakisa emidhudhudhu mitambo yePc. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti isu takavhurika kune chero mazano uye isu tichafara kukubatsira iwe mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Musha » videogames » Iyo yakanakisa chess mitambo yePC